Home Wararka Madaxweyne Xasan Sheekh oo balan qaaday doorasho qof & Cod ah
Madaxweynaha Cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay qorshihiisa xiga ee doorashada soo socota markii uu dhamaado mudada Afarta Sano ah ee dowladdiisa maadaama doorashooyinkii la soo dhaafay ay ahaayeen kuwo dadban.
Madaxweynaha oo hadal ka jeedinayay munaasabad lagu abaal mariyay Guddiyadii doorashooyinka ayaa sheegay inaan Teendhada dib loogu noqoneyn marka la gaaro sanadka 2026, isaga oo ka codsaday Bulshada Soomaaliyeed inay kala Shaqeeyaan.
Wuxuu hadalkiisa uu intaasi ku daray Madaxweyne Xasan Sheekh in dalka aysan kajirin cabsi badan oo ka dhashay doorashada, balse dadkeenna aywaayo aragnimo badan ka dhexleen dowladnimada, wuxuuna dalbaday in la is cafiyo si loo gaaro horumar.
Ugu dambeyn waxaa uu balan qaaday in dalka Soomaaliya gaarsiin doono in dadkeeda ay isku doortaan doorasho qof iyo Cod ah, hayeeshee taasi ay u baahan tahay in laga wada Shaqeeyo.
Previous articleMuxuu horey uga yiri dilkii Ikraan Tahliil taliyaha cusub ee Nabad-sugidda Mahad Salaad?
Next articleGabar 16 jir Soomaali ah oo dishay nin ajnabi ah oo isku dayey inuu kufsado
Breaking News: Kulan Degdeg ah oo ka socda Madaxtooyada Hirshabelle